Literature News | Lumbini Online Patrika
रातको एघार बजिसकेको थियो । निन्द्रा लाग्ने सुरसार अझै थिएन् । सधैँझैं छट्पटी र बेचैनी मनमा छदैँ थियो । एक्कासी मोबाईलले केही सन्देश ल्यायो । हेरेँ, म्यासेज आएको रहेछ । नम्बर परिचित थियो । ‘ह्याप्पी बर्थ डे नानु, जिन्दगी भर खुशी हुनु । म सधै तिम्रो खुसी हेर्न चाहान्छु ।’ म्यासेज हेरेसँगै पुराना दिनहरु बल्झन थाले । सोचेँ जिन्दगी भर मेरो खुशी चाहान...
यी उपन्यासहरू मेरा नितान्त व्यक्तिगत रुचिले भरिएका छन् । यी मेरा टेस्टका उपन्यास हुन् । मलाई यी उपन्यासले केही न केही सिकाएका छन् । सिकेका कति कुरा मलाई थाहा छन्, कति कुरा थाहै नपाई मैले सिकेको छु, यो पनि मलाई थाहा छ । म उपन्यास पढ्दा पहिलो पन्नामै गम्भीर भएर पढ्न थाल्दिनँ । यो उपन्यासबाट यस्तो ज्ञान पाइएला, उस्तो सुक्ति भेटिएला भनेर पनि सोच्...
घरबाट हिँड्दा ९ बजेको थियो, फर्किंदा ठ्याक्कै ११ बजेको रहेछ । रमेश उताउतैबाटै आफ्नो घर पसेको थियो । घर पुग्नेबित्तिकै ‘ममी कहाँ हुनुहुन्छ ?’ भनी कराएँ । ‘किन ? के भयो?’ भन्दै ममी बाथरुमबाट निस्कनुभयो । ‘ल, त्यो सरफमा भिजेको हात धोएर आउनु त’ भनी कराएँ । ‘के ल्याइस् त्यस्तो ?’ भन्दै ममी हात धोएर आउनुभयो । ‘हेर्नु, यो कागज’ भन्द...
सोमवार कार्तिक ६ २०७४ राज सुवेदी बिवश
झर्यो आँसु थोपा नजिक को भए र ? सबै आउँनु जल्छूँ म आगो भएर । यहीँ वर मिलोस् जिन्दगीमा मलाई सदा बाँचु आमा म तिम्रो भएर । बताऊ प्रिया ओखती के छ त्यस्तो विगत याद आउँदैन कस्तो भएर । तिमी जून तारा म धर्तीको धूलो कहाँ सक्छु त्यो चुम्न धागो भएर। कहाँसम्म घाती बन्यो याद तिम्रो सधैं दुख्छ छाती अचानो भएर । बहर : मुतकारिब बहर बहार
शनिबार असोज १४ २०७४ लुम्बिनी अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं १४ असोज– बडादशैं नेपालीहरुको यस्तो चाड पनि हो, जुन चाडमा वर्षमै सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक विदा हुने गर्छ । दशैंसँगै विदालाई नेपालीले आ–आफ्नो तरिकाले मनाउने गर्छन् । दशैंको विदालाई पुस्तक पढेर मनाउने पुस्तक प्रेमी पनि मस्तै हुन्छन् । केही दशक यता साहित्यको माहोल पनि बाक्लिँदै गएको छ । नेपालभर नै बेलाबेलामा पुस्तक प्रदर्शनीले पनि पुस्तक...
आइतवार असोज ८ २०७४ जुना केसी
यो देशको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा सही सूचना र सीप तालिम पुर्याऔं घर घरमा । वेरोजगारी यूवा दलालले ठग्गछन् भन्ने डरमा देश चलेको छ रेमिटान्स्को भरमा । वेरोजगारीलाई रोजगार दिने नाममा ठगेका छन् आरसीसी घर, सन्तान विदेश बैंक भरेका छन् । गरिवले साहुको ऋण तिर्दा तिर्दै पछि परेका छन् दलाली चाही मालामाल गरिब नै मरेका छन् । गाउँघर शुन्य अनि ...
बुधवार असोज ४ २०७४ भुपेन्द्र खत्री
एक-दुइ दशै बिराउँदौमा, माटै भुल्यो नभन, परदेशीले फर्की आउने, बाटै भुल्यो नभन, दु:ख लाग्छ चाडवाड, तिमी धेरै छौ पर प्यारो मेरो संस्कृतिको, पाटे भुल्यो नभन, किसानै हुँ हलाे जुवा, देछु हर सपनी, शरद याम तोरी फल्ने, फॉटै भुल्यो नभन, पाखुरीमा साँध लगाई, फर्की अाउँला देश, तिम्रा लागि केही गर्ने, अाटै भुल्यो नभन, दशै तिहारकाे बह...
पैसै तिरेर सिक्न खाेजे तर सिकिन महिले केही
आइतवार असोज १ २०७४ पबित्र आचार्य
पैसै तिरेर सिक्न खाेजे तर सिकिन महिले केही। सिकाउन सकेनाै भन्दै गुनासाे गरिन कहिले केही। गल्ति भाे भनेर मात्रै म सहि के कसरी बुझ्न सकु। यसरी सहि भन्ने सुनिन मात्रै सुने गल्ति भाे जहिले केही । दाेषि अरु भन्ने दाबि गर्दिन दाेष धेरै धेरै म भित्र पनि छन। तर पक्कै पनि मलाई हिज हेपेकै हुन बुझ्दै छु अहिले केही। म मान्छु...
पिर नगर काेदाे पिठाे चाल्न पनि जानेकि छु
बुधवार भाद्र २८ २०७४ पबित्र आचार्य
भत्किएको घर माटाे ल्याइ टाल्न पनि जानेकि छु। अाफ्नै हातले बाति काति बाल्न पनि जानेकि छु। कुरितिलाई नमाने पनि संस्कृतिलाई भुल्या छैन। हिजका ती संकृतिलाइ जाेगाई बर्तमानमा ढाल्न पनि जानेकि छु। खाकि छैन अाटाे , ढिडाे तराईमा हुर्किएकि म। पिर नगर काेदाे पिठाे चाल्न पनि जानेकि छु। पर्याे भने पात गासेर टपरिनि बनाउ छु । दुख परे भाेलि गाेबर फ...
प्रकट पगेनी ‘शिव’ को कविता
शनिबार भाद्र २४ २०७४ लुम्बिनी अनलाइन पत्रिका
गज्जव गरेका छन् गाई पाल्न थालेका छन् अचेल देवीरमणहरूले । *** कतार गएका देवीरमणहरू घर फर्किन थालेका छन् दुवईबाट फर्केका देविरमणहरूले गोठ बनाउँदै छन् देवीरमणहरू साउदी, इराक, अफगानिस्तानबाट ल्याएको पैसाले जर्सी र होलस्टाइन गाई किन्न थालेका छन् अचेल गाउँमा नयाँ लहर आएको छ गाई पाल्न थालेका छन् देवीरमणहरूले । *** गा...
मदनकृष्ण श्रेष्ठ आत्मकथा ‘महको म’ विमोचन
मंगलवार भाद्र २० २०७४ रवीन्द्र राज ओझा
काठमाडौं । बरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ आत्मकथा ‘महको म’ लिएर पाठकमाझ आएका छन् । मंगलबार एक कार्यक्रमबीच उनका जोडी हरिवंश आचार्यले उक्त आत्मकथा विमोचन गरे । ‘आत्मकथा लेख्न सजिलो हुन्छ होला भन्ठानेको थिएँ , ‘मदनकृष्णले कार्यक्रममा भने, ‘तर मलाई ६ वर्ष लाग्यो ।’ आत्मकथा लेख्न सुरु गरेको बेलामा श्रीमतीलाई क्यान्सर भएर उपचारतिर लाग...
मंगलवार भाद्र २० २०७४ राज सुवेदी बिवश
समयले जहाँ लान्छ त्यै जानुपर्छ। भएसम्म बाटो अझै जानुपर्छ। सखी एक हातले बज्दैन ताली जहाँ जाऊ हामी सँगै जानुपर्छ। सबै अन्त्यमा बन्छ माटो खरानी कुरा ज्ञानगुनका लिदै जानुपर्छ । गए आँसु बग्दै नदीसग मिलेर बगे भावनामा तलै जानुपर्छ। हरायौ तिमी आज पैसा पछाडि चोखो प्यार हारेर मै जानुपर्छ। बुझे आज थोरै मजा छैन माथि रहर मेट्न मनको तलै...
महेश सरको ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ आज विमोचित हुँदै
शुक्रवार भाद्र १६ २०७४ रवीन्द्र राज ओझा
१६ भाद्र, काठमाण्डौँ। लामो समयदेखि आफ्नो कलम साहित्यिक क्षेत्र मा चलाउदै आउनु भएका महेश पौड्याल 'प्रारम्भ' को कथा सङ्ग्रह “त्यसपछि फुलेन गोदावरी” आज ३ बजे प्रज्ञा भवनमा विमोचित हुने भएको छ । महेश सर कथा मात्र नभइ कविता,समिक्षक,नाटककार,अनुवादक,प्राध्यापक, क्षेत्रमा पनि सक्रिय व्यक्ति हुन् । सो कथा सङ्ग्रहको त्रिभुवन विश्व विद्यालय अंग्रेज...
१५१ औँ मोति जयन्तिको अबसरमा शिवगढि साहित्य संगम नेपालको रचना कार्यक्रम सम्पन्न
शनिबार भाद्र ३ २०७४ लुम्बिनी अनलाईन पत्रिका
हरि आचार्य भदौ ३ , कपिलबस्तु । १५१ औँ मोति जयन्तिको अबसर पारि आज शिवगढि साहित्य संगम नेपाल कपिलबस्तुले विविध तिज विशेष तथा रचना वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । १९२३ साल भदौ २५ गते जन्मिनुभएका मोतिराम भट्टको सम्झनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । लामो समय बनारस बस्नुभएका भट्ट आफुसगैँ अरुलाई पनि साहित्यिक तथा रचनात्मक क्षेत्रमा अग्रसर ...
बुधवार साउन २५ २०७४ बरुण ज्ञवाली
सुजन मिलेको ज्यान उज्यालो अनुहार भएको एउटा गाउँको केटा हो। अाफ्नो उच्च शिक्षा हाशिल गर्न गाउबाट बुटवल शहरको प्रतिष्ठित क्याम्पस लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसमा BBS तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत छ । प्रिया चाहि छोटो जिउडालकि पातली शहरमै हुर्केकि केटी हो। उ पनि लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसमा नै BBS पहिलो बर्षमा अध्ययनरत छ। क्याम्पसमा बार्षिकोत्शव समारोह नजिक...
इतिहास नौलो ..........
मंगलवार साउन २४ २०७४ अर्जुन शर
इतिहास नौलो भेटिन्छ वीर पुर्खाको अस्तुमा सहस्र बुद्ध जन्मन्छन् फेरि कपिलवस्तुमा इतिहास नौलो .......... चाँदीको घेरो डाँफेले फेरो लाएको भूगोल सबैको उस्तै घाम र जून सुन्दर अमोल तराई मधेस उपत्यकाली पहाडी हिमाली कपिलवस्तु अाएर गासौँ साइनो नेपाली इतिहास नौलो .......... अवधी थारू उर्दू नेवारी संस्कृत र पालि भाषा साहित्य कला संस्कृति मि...
कलाकार घनश्याम गौतमको मन छुने गीत
शनिबार साउन २१ २०७४ घनश्याम गौतम
तिमी छैनाै भने मेराे मुटु धड्किदैन तर तिमिलाइ याे मायाकाे मूल्य थाहा छैन तिमिले त मन परि जे गरे नि हुने याे मुटुमा छुरा हानि कठै भन्दै रुने म त पागल एकाेहाेराे तिमिलाई माया गर्ने......! तिमी भने हाँसी मजाक ख्याल ठट्टा गर्ने तिमी सँगै बग्छु भन्दै किनार मै छाेड्ने माया दिने मन दिने बाटाे अन्तै माेड्ने म त पागल एकाेहाेराे तिमीलाई माया...
बिहीबार साउन १९ २०७४ अर्जुन थापा मगर
दुनियाले जे जे लुटे बाँकी अवशेष मेरो हो मैले टेकेको धर्ति मातृभुमी यो देश मेरो हो दार्जलिङ र गोर्खाल्याण्डको चिन्तन छोड साथी यहाँ दिन दिनै रोइरहेको तराइ मधेश मेरो हो ।
सोमवार साउन १६ २०७४ ईश्वर अवस्थी "अन्जान "
मुक्तक . परीवर्तन भाको छौ भन्छन अचेल // हरीहरम गाको छौ भन्छन अचेल// मेरो यसमा के दोष छर महारानि,, नारी पिरम लाको छौ भन्छन अचेल//
आइतवार साउन १५ २०७४ ईश्वर अवस्थी "अन्जान "
मुट्ठी मानो र सुप्पो'फलाउन खोज्छौ यहॉ आफ्नो मात्रै शासन चलाउन खोज्छौ यहॉ जोडिएर किन धर्म जात र बिशेष संग सोझासाझा जनहरु कुदाउन खोज्छौ यहॉ भाईचारा हराएको भान हुन्छ यहॉ मलाई गरि मजाक धर्मको उडाउन खोज्छौ यहॉ हिन्दु मुस्लिम बौद्ध अनि क्रिश्चयनहरु सबै भाई भाई घर घरमा जुधाउन खोज्छौ यहॉ अन्जानले शान्ति भनि कलपना गर्दा गर्दै क...